नबुझी गरिएका हास्यास्पद तर्क
Monday, 15 November 2010 15:08	मदनमणि दीक्षित
संसदीय सिद्धान्तको मूल आधार बहुमतको सरकारका पक्षमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले १६ पटकको मतदानसम्म पनि दरिलो अडान लिए। त्यस्तो अडान लिँदा हार्ने वा जित्नेबारे कुनै पक्षसित ननिहुरी सिद्धान्तनिष्ठ रहेर आफूलाई यथार्थमै लोकतन्त्रवादी सिद्ध गरेकोमा नेता पौडेललाई लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् नेपालीले हार्दिक बधाई दिनुपर्छ। हस्तिनापुरका झेलमा पाण्डव पक्षले १३ वर्ष वनवास जानुपरेको थियो। वाल्मीकि रामायणमा राम, सीता र लक्ष्मणले दशरथको नैतिक कमजोरीका कारणले १४ वर्षको वनवास बेहोर्नुपरेको थियो। ती घटनाको तुलनामा पौडेलको पराजय हार नभएर नैतिकताको विजय हो।
माओवादीका भित्ते नारा
Monday, 15 November 2010 14:52	नारायण खड्का
कुनै दल, समूह वा व्यक्तिका विचार जनतासम्म पुर्‍याउन सजिलो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी माध्यमका रूपमा सार्वजनिक वा निजी भवनका भित्तामा नारा लेख्ने गरिन्छ। यस्तो लेखन विशेषतः एकदलीय साम्यवादी अधिनायकवाद या सैन्य वा तानाशाही राजतन्त्रात्मक वा धार्मीक कट्टरपंथी राज्य व्यवस्थाको विरोधमा गर्ने गरिन्छ। किनभने त्यस्ता शासनमा वैचारिक स्वतन्त्रता निषेधित हुन्छ। त्यस्ता शासनमा राजनीतिक विचार प्रवाह गर्न जासुसी तन्त्रले सजिलै पत्ता लगाउन नसक्ने अन्य माध्यम पनि प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई धार्मीक कट्टरपन्थको बन्धनमा राखिएको र जहा वैचारिक स्वतन्त्रता दण्डनीय मानिने आजको इरानमा राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा चल्तीका नोटलाई प्रयोग गरिएको छ।
Sunday, 14 November 2010 10:57	कान्छाराम तामाङ
नेपालको राजनीतिबारे रूपचन्द्र विष्टले भनेका थिए, 'टाठा, बाठा अपराधी भए, साधारण जनता पशु भए, शासन सत्तामा कुचक्र पस्यो, असीमित हिंसा हुने नै भयो।' अर्को प्रसंगमा उनले भनेका थिए- 'जब ठूलाठालू परजीवी, साधारण परमुखी हुन्छ, स्वावलम्बीको मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ, सामाजिक न्याय हुँदैन, अराजकताले गुट गर्छ।" रूपचन्द्रले यसो भन्दा उनलाई बहुला भन्ने बुद्धिजीवी जीवितै छन्। रूपचन्द्र बहुला रहेनछन्, बरु उनलाई बहुला भन्ने नै बहुला रहेछन्।
माओवादीको पालुङटार बैठक
Sunday, 14 November 2010 10:53	किशोर नेपाल
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पलायन प्रारम्भ भएको हो? माओवादीमा दशक लामो कष्टपूर्ण संघर्षको सफल नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष कामरेडको एक छत्र नेतृत्वको उपादेयता सकिन थालेको हो? माओवादी पार्टीले वैकल्पिक नेतृत्वको खोेजी गर्न थालेको हो? माओवादी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकको मुखैमा नागरिक दैनिकका भोजराज भाटले माओवादीका वरिष्ठ दुुई नेता मोहन वैद्य र डा.बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्न तयार पार्नुभएका फरक दस्तावेज सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराएपछि नेपाली वामपन्थी राजनीतिका अध्येताको मनमा यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
Sunday, 14 November 2010 10:52	प्रकाशचन्द्र लोहनी
देश विचित्र अवस्थामा छ। कामचलाउ सरकार छ तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिको दुःसाहस गरिरहेछ। संसद् नयाँ सरकार दिन असमर्थ छ। बजेट चाहिन्छ भनी सबै दल स्विकार्छन्, तर कामचलाउ बजेटका लागि पनि सहमति गर्न तयार छैनन्। संविधानसभा काम नपाएर घोर निद्रामा छ। देशमा अविरल सहमतिको नारा छ तर को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बुँदामा भोट हालेर निर्णय गर्न पनि दलहरु तयार छैनन्। देश लथालिंग र भताभुंग पारिँदैछ।
सर्वोच्च ठूलो कि ओलम्पिक?
Friday, 12 November 2010 09:46	राजेन्द्र ज्ञवाली
अन्ततः नेपालका खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारी नेपाली चीनको गुआङ्झाउमा शुक्रबारबाट हुने १६ औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरे। सोहौं एसियाडमा जाने नेपाली टोलीको सेभ दि मिसन को हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बीच विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका थिए। त्यसपछि अन्तिम समयमा मन्त्री नेपालीलाई नै नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिन तीनै पक्ष सहमत भएका थिए। तर यो सहमति पूर्व नै ओलम्पिक एनओसीले आफ्ना उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठलाई सेभ द मिसन तोकिसकेको थियो।
आर्थिक समृद्धिमा विज्ञान
Friday, 12 November 2010 09:45	दयानन्द बज्राचार्य
आजको विश्वलाई मूलतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ - विज्ञानमा धनी, समृद्ध र विकसित तथा दक्षिणी गोलार्धका विज्ञानमा गरिब, निर्धन र विकासशील मुलुकहरू। विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या बस्ने विज्ञानमा धनी र विकसित मुलुकले विश्वको कुल धनको करिब ८० प्रतिशत उपभोग गर्दै आएका छन् भने विश्वको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका विज्ञानमा गरिब, अविकसित र विकासशील राष्ट्रले विश्वको बाँकी करिब २० प्रतिशतमा गुजारा चलाउँदै आएका छन्। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विकसित मुलुकको करिब ६१ प्रतिशत र विकासशील मुलुकको३९ प्रतिशत योगदान छ।
जनताका तराजुमा नेता
Friday, 12 November 2010 09:44	खगेन्द्र संग्रौला
रातदिन दालभातडुकुका लागि हड्डी घोट्न विवश जनसाधारणको नेतालाई तौल्ने तराजु आफ्नै किसिमको हुन्छ। ती घोषणापत्रका सिद्धान्त र आदर्श तथा नीति र कार्यक्रम हेरेर नेताको लेखाजोखा गर्दैनन्। के भनेको थियो र के गर्दैछ? पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ? जनताका नेतालाई तौलने जनताका आधार यिनै दुईवटा हुन्। हात्ती वन र गोकर्ण वनका नाटकीय गुप्तवासबाट नेताहरू खाली हात बाहिर निस्के। समस्या गाँठाको गाँठैमा रहे। र, जनसाधारणले त्रु्कद्ध टिप्पणी गरे - हाम्रा रगतपसिनाबाट स"गालिएको राजस्व यिनले खाएरै सिध्याउने भए।
आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
Thursday, 11 November 2010 10:36	कृष्ण खनाल
आलोपालो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मण्डलको प्रस्ताव हाम्रा नेताहरूमा विपक्षी मानसिकताको अभावबाट आएका हुन्। यी दुबै लगभग समान व्यवस्था हुन्। संक्रमणकालका लागि मात्र यीमध्ये एउटा रोज्न पनि सकिन्छ।
Thursday, 11 November 2010 10:33	नरेन्द्रराज पौडेल
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान त पुरानै हो नेपालीका लागि। त्यसैले यसको रहस्य र अन्तरवस्तुवारे लामो बखान छाँटीरहनु नपर्ला। हात्ती आयो वा आउला भनेर आश गर्नु नानीदेखिको बानी। अनि हात्ती होइन फुस्सा हात लाग्नु नियतिकै बेइमानी। गणतन्त्रे नेताले जनताका आङमा हालिदिएको तातो खरानी। अब आफ्नै आँङ कन्याएर छारो उडाऊँ त हिन्नेरी बनिने डर। न कन्याउँ्क त चिलाएर बसिखप्नु नास्ति। भएन अब सास्ती? गतविगतदेखि नै बानीपर्दै आएकोले यसमा नयाँ नौलो आश्चर्य त कसैले ठान्ने छैन। विस्मात पनि तातोछारो मान्ने छैन। मानिहाले पनि कसैले लछारपाटो लाउने छैन।
औषधिको कालो धन्दा
Thursday, 11 November 2010 10:25	विश्वमणि पोखरेल
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको औषधि बिक्री कक्षमा सोही परिसरमा रहेका अरू पसलभन्दा निकै सस्तोमा औषधि पाइन्छ। निजी पसलेले औषधिमा लेखिएको खुद्रा मूल्यअनुसार पैसा लिन्छन्। अस्पतालकै पसलमा भने औषधिमा लेखिएभन्दा सस्तो पर्ने गरी मूल्य तोकिएको छ। तर, त्यहाँ उपचार गर्न जाने दैनिक हजार जनाभन्दा बढी बिरामी औषधि किन्न अस्पतालको बिक्री कक्षमा जाँदैनन्। जानेले पनि डाक्टरले लेखिदिएकै चाहिँ औषधि पाउँदैनन्। अस्पताल परिसरमा रहेका अरू निजी औषधि पसलमा सधैँजसो भिडभाड देखिन्छ। अस्पतालकै पसलमा भने धेरैजसो सुनसान हुन्छ। अस्पतालको पसलमा दैनिक औसत पाँच सातहजारको व्यापार हुन्छ भने निजी पसलमा दैनिक लाखभन्दा बढीको बिक्री हुन्छ।
खाल्टाखुल्टी पुर्ने कि?
Wednesday, 10 November 2010 14:28	रवीन्द्र मिश्र
तिहारको रमझम सकियो। मानिसहरूले आआफ्नो घर, परिसर सजाए तर त्यसभन्दा बाहिर कमैको ध्यान गयो। बत्ती नै बत्तीले झकिझकाउ घरबाहिर अलपत्र फोहोर देशका सबभन्दा धनीमानी बस्ने काठमाडौंमा जताततै देखियो। आफ्नो घरको परिसरभन्दा बाहिर नागरिकको ध्यान नगएसम्म देश बन्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि कसैमा देखिएन। देशका अति­धनाढ्यहरूले लक्ष्मीको भक्तिभावपूर्ण पूजाआराधना गर्दै आफ्नो व्यापार व्यवसाय फस्टाओस् भनेर प्रार्थना गरेका तस्बिर पत्रिकामा देख्न पाइयो तर उनीहरूमध्ये धेरैले गरिबीको सागरमा घेरिएको सम्पन्नताको टापुमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन भन्ने बुझेको देखिएन। त्यस्तो सम्पत्ति लक्ष्मीले गरेको व्यंग्य हो, उनको आशीर्वाद होइन। त्यसैले संसारभर नै गरिब देशका अधिकांश धनाढ्य असुरक्षाको चिन्ताबाट सधैं ग्रस्त हुन्छन्।
Tuesday, 09 November 2010 11:31	शकुन्तला जोशी
राज्य व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन भए पनि समाजको सामन्ती संरचना बदलिएको छैन। पुरानै संस्कृति, विचार, चिन्तन र परम्परा लगभग पहिलेजस्तै छ। लामो समयदेखि पित्तृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको सिकार नेपाली महिलाको अवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छैन। पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा महिला दोस्रो दर्जाको प्राणी ठानिइँदै आएका छन्। सिंगो सामाजिक व्यवस्थामा पुरूषको सहयात्रीका हैसियतमा आउन पाएका छैनन्। यसो हुनुका विविध अवस्था र कारण छन्।
Tuesday, 09 November 2010 11:28	भवानी बराल
राष्ट्रिय राजनीतिको जलवायु परिवर्तन गर्ने होहल्लासहित सम्पन्न बाह्रौं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको आफ्नै राजनीतिक जीवनमा समेत तात्विक फरक आएको देखिएन। महाधिवेशनले कांग्रेसकै आन्तरिक जीवनमा पनि खासै फरक पारेन।
Tuesday, 09 November 2010 11:25	अभय
सियोल निवासी पार्क चाए पाङ र उनकी पत्नी ली कुम ह्योन दक्षिण कोरियामा नेपालीका बाआमा भनेर चिनिन्छन्। छाबिएचिब (सहयोग घर) नामक संस्था खोलेर दुःखी र अशक्तलाई यस दम्पतीले ठूलो सहयोग गरेको छ। कोरिया पुगेर अलपत्र परेका, बिरामी, अंगभंग भएका थुप्रै नेपालीलाई पाङ र ह्योनले नेपाल बौद्ध संघमार्फत उद्धार गरेका छन्।
निकास यता, नेता उता उता
Friday, 05 November 2010 15:22	राजेश केसी
अघिल्लो साता चिनिया उपमन्त्रीसँग एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आग्रह गरे- 'चीन र भारतले नेपालको निकासबारे दिल्लीमा वार्ता गरोस्।' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि मात्र नेपालले निकास पाउने मलाई आशा छ।' जबाफमा चिनिया नेताले भने -'चिनिया जनता, सरकार र पार्टी नेपालमा शान्ति चाहन्छ, तपाईँका आन्तरिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौ। बरु भारतसँग साकारात्मक वातावरण बनाउनुहोस्।' गत आइतबार चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि त्यसै भने।
सहमतिको रटमा फौजीतन्त्रको भ्रुण
Friday, 05 November 2010 15:18	खगेन्द्र संग्रौला
पथभ्रान्त राजनीतिमा प्रधानमन्त्री चुनावको घटिया याम छ। र, चुनावमा जोक्कर्‍याइँको हेरिनसक्नु क्रीडा जारी छ। प्रतिस्पर्धीविहीन मैदानमा एकल खेलाडीको भूमिकामा रामचन्द्र पौडेल क्रियाशील छन्। सोह्र पटक गुल्टिसके तैपनि जोक्कर्‍याइँको आनन्दबाट रामचन्द्र तृप्त भएका छैनन्। रामचन्द्रका नैतिक वस्त्र पातलिँदै र चिरा पर्दै धूजाधूजा भइसकेका छन्। र, मैदानको वस्त्रविहीन दृश्य हेर्न नसकेर दर्शकदीर्घाबाट सबै दर्शक मुख छोपेर अलप भएका छन्। तैपनि रामचन्द्र बेतुक हाउभाउमा मग्न छन्। महान् खेलाडीको भव्य भूमिकामा म छु र नै संसदीय प्रणाली जेनतेन सुरक्षित छ भन्ने मिथ्या कल्पनाको नशाले लठि्ठएर रामचन्द्र हाँडीघोप्टेको बिँडो थामिरहेका छन्।
Friday, 05 November 2010 15:16	राजेन्द्र ज्ञवाली
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँगको विवादको अस्थायी समाधान भएको छ। साग, एसियाड र ओलम्पिक जस्ता बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि विवाद गर्ने परम्परालाई कायम राख्दै यस पटक नेपाली टोलीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। अन्तिम समयमा खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारी नेपालीले टोलीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिएका छन्।
छ लेनमा छड्के ड्राइभ
Thursday, 04 November 2010 13:21	विश्वमणि पोखरेल
डेढ वर्ष अघिसम्म कोटेश्वर ट्राफिक जाम हुने राजधानीका प्रमुख केन्द्रमध्ये पर्थ्यो। भक्तपुर भएर राजधानी छिर्दा कहालीलाग्दो जाममा फसिन्थ्यो। केही महिनायता त्यो जाम हटेको छ। कोटेश्वरको अनुहार बदलिएको छ। निर्माणाधीन ६ लेनको तीनकुने - सूर्यविनायक सडकको तीनकुने - कोटेश्वर - जडिबुटी खण्डका १.७ किलोमिटरमा सबै काम सकिएका छन्। छोटै दूरी भए पनि निर्माण सम्पन्न सडकमा गुड्न पाउँदा मुलुकको सबैभन्दा चौडा सडकमा यात्रा गरेको अनुभव हुन्छ। फराकिलो बाटो, नागरिक सुरक्षा निम्ति सडक छेउमा फलामे बार, डिभाइडर, बत्ती, यात्रु चढ्ने र ओर्लने निश्चित ठाउँ अर्थात् राम्रो सडकको लगभग सबै पूर्वाधारयुक्त देखिन्छ। अहिले सबै सडक बनिसकेको छैन। जापानले गर्नुपर्नेमा ७० प्रतिशत काम सकिएको बताइन्छ। तोकिएको समयममा काम सकिए पाँच महिनापछि जापानले करिब नौ किलोमिटर दूरीको यो उम्दा सडक हस्तान्तरण गर्नेछ।
Thursday, 04 November 2010 13:17	सी के लाल
दसैं पुरुष प्रधान पर्व हो। नयाँ लुगा लगाउने, मासु खाने, पिङ खेल्ने र टीकामा पाइने आशीर्वादी रकममा केटाकेटी रमाउने भए पनि दसैंको रमझममा महिलाको भूमिका गौण प्रायः हुन्छ। मधेसतिर त झन् खेतीपातीमा रमाउनेलाई दुर्गापूजाको मेला हेर्नेबाहेक अरू चलनले छुँदा पनि छुँदैन। नेपालीपनको प्रभाव नपरेका परिवारमा टीका लागाउने चलन अझसम्म सुरु भएको छैन। लक्ष्मीपूजादेखि छठसम्म चल्ने दस दिनको शरदोत्सवको रमाइलोले भने बच्चादेखि बूढासम्मलाई तरंगित तुल्याएको हुन्छ। खर्चको जोहो गर्ने चिन्ता परिवार प्रमुखलाई पक्कै हुँदो हो। अन्य सबै भने दिपावलीभन्दा दुईचार दिनअघि नै अलाप गर्न सुरु गरिसकेका हुन्छन्, 'सुख, सुखराति र दियाबत्ती।' बयान गरिनसक्नुको उल्लास बोकेका हुन्छन्, यी केही सामान्य शब्दले।